Okthobha 2019-Funda ukurhweba
Inyanga: October 2019
I-FTX Crypto Derivatives Exchange: Umkhwa omtsha kuThengiso lweXesha elizayo
Ngemfuno ekhulayo yokurhweba ngokuvela kwi-crypto, amaqonga amatsha otshintshiselwano nge-crypto ngoku avelayo. Ukurhweba ngokuveliswa, iakhawunti ngaphezulu kwesiqingatha seeyure ezingama-24 zokurhweba ezirekhodiweyo. I-chip entsha kwibhloko yi-FTX, utshintshiselwano oluphuma kwi-crypto olusuka kwi-FTX yorhwebo ltd, inkampani ese-Antigua naseBarbuda.
Iminikelo ye-FTX ye-crypto ibandakanya ikamva, ithokheni ye-FTT enexabiso kunye nentengiso ye-OTC. Izenzele i-niche yona ngokwethokheni yayo kunye neempawu zokurhweba. Nangona yayintsha kakhulu, urhwebo olurekhodwe kuyo isenokungabi lukhulu, kodwa abahlalutyi bakholelwa kwindidi eyahlukeneyo yeminikelo ye-crypto eyinikelayo, kungangqina ukukhula okukhawulezileyo.
Kutshanje, i-FTX izise ebhodini ii-indices zayo, ii-cryptocurrencies ezisibhozo ezaziwayo ezinxulunyaniswe ne China. Ezi zi-BTM, IOST, NEO, NULS, ONT, QTUM, TRX, kunye neVET.
I-FTX izakhele igama e-China ngaphandle kokuchasana ne-china ye-crypto. Ezi ngqekembe ziya kufumaneka kubarhwebi njengekhontrakthi yexesha elizayo ngelixa unikezela ngexabiso lexesha elingaphezulu kwekhulu.
Uluhlu lweqonga layo lokurhweba kwikamva zii-cryptocurrensets ezinkulu kunye neengqekembe zemali ezifana neBitcoin (BTC), i-Ethereum (i-ETH), iLitecoin (i-LTC), iRipple (i-XRP), i-Index ye-Altcoin, i-Midcap Index, iShitcoin Index, kunye ne-Index Token Index.
I-FTX ikunika 'amandla' kwi-capital yakho ngexabiso layo lexesha elingaphezulu kwekhulu.
Ikhontrakthi yayo yexesha elizayo inexesha lokuhlala lekota yangoku, kwikota elandelayo kunye no-a ikamva elingapheliyo (DRGN-PERP).
Ixesha elizayo le-FTX ziStablecoins-zihleliwe ke oku kukuvumela ukuba wenze iidipozithi kunye neStablecoins ngelixa ubamba inzuzo kunye nelahleko yakho (PNL) nayo. Ke, akukho sidingo sonxibelelwano lweakhawunti yebhanki.
Isibambiso esiguqukayo esinokuba yiStablecoins okanye imali ye-fiat.
Akukho mali idipozithi okanye irhoxisiweyo.
Imirhumo yokurhweba ephantsi ejolise kumsebenzisi omkhulu wevolumu.
Ibhonasi yokubhalisa ngokubhekisa kubasebenzisi bayo.
Ukuxhaswa nguPhando lwe-Alameda, umboneleli ophezulu wokugcina imali kwi-cryptocurrency, i-FTX inokufikelela kwiincwadi zoku-odola.
Iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula ngohlobo lweedipozithi ezinje nge-TUSD, USDC, PAX, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Tether, Stablecoins kunye nezinye ezaziwa njenge-FTX zamkelwe kwiqonga layo.
Isalathiso sexesha elizayo se-FTX sisivumelwano sokuqala.
I-FTX ikwabonelela abasebenzisi bayo ngesakhono sokwenza uQinisekiso lweFactor 2 (2FA) usebenzisa iAuthy okanye iAuthenticator kaGoogle.
I-FTT: Iithokheni eziXhasiweyo zeFTX
Iithokheni zayo eziXhasiweyo ziithokheni ze-ERC20 ezinceda abasebenzisi ukulawula umngcipheko ngelixa bephinda befumana inzuzo kwi-asethi ethengiswayo.
Ngaba i-FTX Legit?
Akukho nto ingako inokuthethwa malunga noku kuba isemtsha kodwa khange kubekho kunyhashwa kwamatyala okanye ubusela okoko yaqala. Nangona kunjalo, iinkcukacha malunga nendlela ye-FTX yokugcina imali yomsebenzisi ayaziwa.
Isidingo sokuqinisekiswa sinokuvela ngokurhoxiswa ngaphezulu kwewaka leedola kunye nabasebenzisi abanqwenela ukwandisa umda wokurhoxa. Kule nto, incwadi yesazisi enobungqina bedilesi, incwadi yesazisi, umphambili ovavanyiweyo nasemva ngomfanekiso ophawulwe "FTX" kunye nomhla unokufuneka.
Utshintshiselwano lwe-FTX luzenzele i-niche ngokwalo nangona kucetyiswa ukuba abasebenzisi basebenzise isixhobo esikwi-Intanethi kwaye bafunde ngakumbi ukwenza olona khetho lufanelekileyo lwaso nasiphi na isixhobo sokurhweba okanye utshintshiselwano.
tags Ukutshintshiselana ngokutshintsha kwe-Crypto, I-FTT, FTX, Ukurhweba kweXesha elizayo
I-AUDUSD iyangena emva kokubetha indawo ephezulu kwinqanaba elikwi-0.6929
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Okthobha 31
I-AUDUSD ibuyile emva kokubetha indawo ethe tyaba kwinqanaba kwi-0.6929 kwangoko kwiseshoni yaseYurophu. Indawo ephezulu efikelelweyo yeyona ndawo iphambili ukusukela nge-26 kaJulayi, njengoko abathengi babenolawulo lokuqala lokuphakamisa isibini ngaphezulu ngaphambi kokudlula ngaphambili kwindawo engaphantsi kwinqanaba kwi-0.6895.
Amanqanaba okumelana: 0.7205, 0.7085, 0.6955
Amanqanaba enkxaso: 0.6847, 0.6723, 0.6671
I-AUDUSD yexesha elide iTrend: Bullish
Kumfanekiso wexesha elide, imeko yokubuyiselwa endaweni kwixesha eliphakathi lulwazi. Nangona kunjalo ayikagqitywa apho. Nangona ixesha elide njengoko inqanaba lokumelana no-0.7085 lihleli, ukuwa okukhulu kwinqanaba le-0.7205 (phezulu) kusalindelwe ukuba kuqhubeke kuye kwi-0.6671 (esezantsi).
Nangona kunjalo, ikhefu lokuthatha isigqibo kwinqanaba le-0.7085 linokuqinisekisa ukufakwa kwexesha eliphakathi kwaye iphinde ivuselele i-rally eqinileyo ukusuka apho, okwangoku, isibini sisesehlotyeni sexesha elide, umbono omfutshane kunye nexesha elide sele uguqukile.
I-AUDUSD iqhubeka isezantsi ngelixa ivavanya indawo ethe tyaba kwinqanaba 0.6882 ngenkxaso echazwe ziiyure ezi-4 ezihamba ngenqanaba eli-13 ngelixa uthumela iseshoni ephantsi.
Nangona isibini seFX sinokuqhubeka nokukhuphukela phezulu ngelixa kusenokwenzeka ukuba senze ukubuyela kwakhona okufutshane okuza ngeenxa yenqanaba lenkxaso ye-0.6847. I-intraday bias isecaleni lokuphinda ubuye kwinqanaba kwinqanaba le-0.6955 yokuchasana okubalulekileyo ngokulandelayo. Ngaphandle koko, imbonakalo yayo inokuhlala i-bearish kwimeko yokubuyela umva.
Ixabiso lokungena: 0.6882
Utshintshiselwano lwamaxabiso e-Bitcoin Cash (BCH) -Iimali zeBitcoin zihlala ziBullish kodwa Ukuphuka kusondele
Olo tshintsho lweentsuku ezisixhenxe zokugqibela lube ngumtsalane onomdla kwiBitcoin Cash emva kokunyuka kwi-7 ukuya kwi-206 yeedola, efikelela kwi-306% yeenzuzo. Okwangoku, i-BCH iye yalahlwa nge-50 yeedola izolo kwaye ixabiso ngoku liye lehla laya kwi- $ 306 (a -274% ilahleko). Nangona kunjalo, sinokulindela ukuba i-cryptocurrency yesine ngobukhulu iqhubeke nokunyusa ukuba i-5.92 yeedola inokuxhasa njengenkxaso. Ngaphandle koko, ixabiso lingahla ngokukhawuleza.
Utshintsho kwixabiso le Bitcoin Cash (BCH): Itshathi yemihla ngemihla-Bullish
Amanqanaba okuphikiswa aphambili: $ 306, $ 335, $ 358, $ 370
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 270, $ 250, $ 242, $ 206
Kwiveki ephelileyo, besikhankanyile ukuqhawuka konxantathu kodwa ngoku iBitcoin Cash ibumba ngaphakathi kwipateni yesitayile esihla ukusukela phakathi kuJulayi. I-rebound ye-25 ka-Okthobha eyi- $ 206 yenze i-BCH irekhodi eliphakamileyo ngeveki le- $ 306 ngelixa ithengisa kumda wesiteshi. Izolo, ixabiso liye lalahlwa kwi- $ 306 kwaye ngoku likhangela inkxaso kwi-270 yeedola ebisandula ukwaliwa.
BCHUSD, Itshathi yemihla ngemihla-Okthobha 31
Ukuvalwa kwemihla ngemihla ngezantsi kwe- $ 270 kungasizisa kwi-250, $ 242 kunye ne-206 yenkxaso kwiintsuku ezimbalwa. Namhlanje, i-RSI 70 yenqatshelwe ukubonisa umguquko onokubakho, nangona i-MACD ibone ukunyuka okuphezulu okubonisa ukuba abathengi balale kwikona. Ukuba indawo engama- $ 270 inokuthi isebenze njengenkxaso, sinokubona ukuqhubeka okuqhubekekayo ukuya kwi- $ 335, $ ​​358 kunye ne- $ 370. Nangona kunjalo, kufuneka sicacise ukunganyangeki kwe- $ 306 ngaphambi kokujonga ukunyuka okuthe kratya.
Utshintsho lwexabiso le-Bitcoin Cash (BCH): Itshathi ye-4H-Bullish
Itshathi yeeyure ezi-4 ijonge ukunyuselwa kodwa iyaqhubeka ukuze ishukume. Ngexesha lokubhala, i-Bitcoin Cash ivavanya inkxaso yenkxaso ekhulayo kwi-270.94 yeeRandi emva kweeyure ezingama-24 zokugqibela eziphantsi kwezinto ezazibonakaliswa ngamakhandlela e-doji. Okwangoku, ukwenziwa kwamakhandlela okwangoku kwe-bearish kusandula ukuhambisa umqondiso wokunyathela. Inkxaso inokubakho kwiindawo ezingama- $ 250- $ 240 xa sele sinendawo ecocekileyo yokuqhekeka.
Itshathi ye-BCHUSD, 4H-Okthobha 31
Ukunyuka ngezantsi kwenkxaso engwevu engwevu kunokuqhubela phambili ukuguqula i-BCH ibuthathaka kwi- $ 220 nakwi- $ 210. Ngelixa i-RSI iwela phakathi kumbindi webhendi, i-MACD ilungile kodwa ngoku ijonge kumanqanaba e-zero. Ngaphandle koko, sinokulindela ukuba i-bounce ukuba umda we-wedge ongaphantsi unokuxhasa imarike. Ukuchasana nokubukela zii-290- $ 306 zones, nangona ukuthenga ngakumbi ukujolisa ku $ 320. Okwangoku, i-Bitcoin Cash ihlala ikwi-bullish kodwa ukuqhawuka kusondele!
BCH YOKUTHENGISA UMqondiso
Thengisa ungeniso: $ 269
I-TP: $ 243 / $ 212
tags BCHUSD, Uqikelelo lwamaxabiso, Uhlalutyo Technical
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin (BTC) -Iimpawu ze-BTC ezingenayo i-Bullish, Ngaba i-9000 yeedola ingabonelela ngeRebound?
Kanye njengokuba ibibanjelwe ngaphambi kokophula ngo-Agasti, inkxaso ye-9000 yeedola iphinde yaqhubeka ukubamba ngokuqinileyo ngokuchasene nokunyuka kwe-bearish kwiintsuku ezine ezidlulileyo ngoku. Iinkunzi zihlala phezulu kumdlalo njengoko zinethemba lokubuya. Kwisithuba semizuzu eli-15, i-Bitcoin yenze i-double-bottom kwaye ngoku ikhangele ukuqinisekiswa ngaphezulu kwe-100-day EMA enokuthi ivelise olunye ukonyuka kwamaxabiso ukuya kuthi ga kwi-12000 yeedola ukuba iyadlala.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 9550, $ 9950, $ 10350
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 9000, $ 8820, $ 8500, $ 8300
Ikhandlela le-Bitcoin lemihla ngemihla liqhubekile ukuvala ngaphezulu kwe-9000 yeedola ukubonisa ukuba iinkunzi zeenkomo zikhusela umhlaba wazo. Okwangoku, iibhere aziyeki ukuthatha ixabiso ngaphandle kwe-9000 yeedola. Ngethamsanqa, iinkunzi zeenkomo zisebenza ngokuqinileyo njengoko zijolise ekuchaseni kwi-9550 yeedola, i-9950 yeedola kunye ne-10350 yeedola kwi-bullish elandelayo kodwa kufuneka bacime i-9350 yeedola.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-Okthobha 31
Siyabona ukuba i-RSI ibonisa uphawu lwamandla. Ngaphandle kwemeko yentengiso yakutshanje, i-MACD kusafuneka iqinisekise intshukumo elungileyo ebambelela ekuqhubekekeni okuqhubayo okwangoku. Ukuba i-Bitcoin iyasilela ukubonelela nge-crossover ye-bullish, i-9000 yeedola inokujika ibuthathaka njengoko ixabiso lingawela kwimimandla engama-8000 eedola. Ukuze intshukumo enjalo yenzeke, i $ 8820, i-8600 yeedola kunye ne-8350 yeedola inokuphononongwa.
Intengiso yokugqibela yeeyure ezingama-24 ivelise iphethini ephantsi kabini yeBitcoin kwitshathi yeyure. Le patheni inokukhokelela ekuthengeni okukhulu ukuba ikhefu liqinisekisiwe ngaphezulu koxinzelelo olumthubi oluthe tyaba ($ 9300). Ngeli xesha, ixabiso leBitcoin linokubetha i-12000 yeedola kodwa olona xinzelelo lusondeleyo, okwangoku yi- $ 9500, $ 9750, $ 10000 nangaphezulu. Njengoko sinokubona, isalathiso seMACD sinika uphawu olushukumisayo kodwa silinde isiqinisekiso.
I-BTCUSD, itshathi yeyure-Okthobha 31
Okwangoku, intengiso ifumene inkxaso kwinqanaba le-RSI 50 emva kokuhla kweentsuku ezine. Ngoku, abathengi balungiselela ukungena ngokugqibeleleyo. Nangona kunjalo, ukuba umqondiso we-bullish ujika ubuxoki, i-Bitcoin inokuphula unxantathu owehlayo kwi-9000 yeedola yenkxaso ukuya kwi-8800 yeedola, i-8600 yeedola kunye ne-8400 yeedola, ibuyele kwibhokisi yokudibanisa engwevu. Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo ngoku zikhusela umgca wazo wokugqibela wokuzikhusela kwimimandla engama- $ 9000.
Thenga ukungena: $ 9070
I-TP: $ 9512
tags BTCUSD, Uqikelelo lwamaxabiso, Uhlalutyo Technical
I-Shyft yamkela amaLungu amatsha kwiBhodi yayo yokuCebisa
Ukuhlaziywa: 30 October 2019
I-Shyft Network inyuse abasebenzi kwiqela labo lokucebisa kunye namalungu angaphambili e-Financial Action Task Force (FATF).
Ngokwengxelo yeendaba epapashwe nge-28ti ka-Okthobha, inkampani kawonkewonke ye-blockchain, uShft uhlaziya ibhodi yabo yokucebisa noJosee Nadeau, intloko yangaphambili yabathunywa baseCanada kwi-FAFT kunye noRick McDonell, owayenguNobhala oLawulayo weFATF.
IQela eliSebenzayo lezeMali (iFATF) lithathwa njengeyona arhente ibalaseleyo yokulawula imali emhlabeni. Nangona le arhente inganyanzelisi imigaqo yayo kwimibutho yezemali, kubalulekile ukuba imigaqo-nkqubo yayo ithotyelwe yimibutho yezemali kwihlabathi liphela.
NgoJuni, i-FATF yapapasha imigaqo emitsha emalunga nokulawulwa kwemali yedijithali. Le mithetho inyanzelisa imigaqo eyayithintelwe ngaphambili kushishino lwebhanki, kwicandelo le-cryptocurrency.
Lo mthetho mtsha wokugcina imali waziwa ngokuba "ngumgaqo wohambo" kwaye uyalela ababoneleli beenkonzo zeasethi ebonakalayo (VASPs) ukuba baxele ulwazi lwabucala lwentengiselwano nganye eyenziweyo. Ukusilela ekuthobeleni lo mthetho kunokutsala isohlwayo kunye nezithintelo kufikelelo kwiimarike zamanye amazwe.
I-Shyft ijolise ekuphumezeni isicombululo secandelo ngokubanzi kumgaqo wokuhamba we-FATF obekwe kwi-VASPs ngokusebenzisa ipasipoti yesazisi sikaShyft, ukuvala iziseko zedatha, kunye nesiseko sokuqinisekiswa kwedatha.
Kulapho ukubaluleka kukaNadeau kunye noMcDonell kuza kudlala khona. U-Shyft ulindele ukuba amalungu angaphambili e-FATF azise iminyaka yawo yamava abalulekileyo kwibhodi yeengcebiso ngokubhekisele kule njongo.
Ixesha elimisiweyo lokuThobela
I-FATF iyalele ukuba ulawulo lwasekhaya kunye nee-VASPs zinonyaka nje kuphela zokwenza imodeli yolawulo elandela umgaqo wokuhamba.
IGosa eliyiNtloko lokuThobela kunye neeNqobo eziseSikweni eBittrex, uJohn Roth kudliwanondlebe wathi umhla wokugqibela wonyaka omnye owanikwa ii-VASPs awuyi kwanela ngokujonga ubunzima becandelo kunye neendleko zokuqokelela ulwazi lwangasese lwentengiselwano. Uqhubeke wathi akukho nkampani kweli candelo ihambelana nalo mthetho mtsha, nangona kunjalo, zikhona iingxoxo eziqhubekayo malunga nendlela yokusingatha lo mbandela. Uye wathi ukusombulula le ngxaki, kuya kufuneka kusetyenziswe iindlela ezintsha ezingafakwanga.
tags Ukuphuhliswa kweBlockchain, Cryptocurrency, Iintloni
I-Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso-Ukuqhekeka koonxantathu i-LTC isiya kwi-50 yeedola phakathi kokuDityaniswa kwangaphakathi
Ukulandela ukuthengwa okukhulu ngoLwesihlanu ophelileyo ukusuka kwi- $ 47, iLitecoin ngoku idibanisa i- $ 57.8 emva kokurekhoda i-64 yeedola njengenyanga ephezulu yenyanga. Ukucinezelwa kwangoku kubangelwe sisixa esiphantsi sevolumu yokuthengisa. Okwangoku, i-Litecoin i-bearish kwithuba elide kodwa kwiintsuku ezisixhenxe zokugqibela zokuthengisa ziye zavumela ixabiso ukuba lithengise ngaphezulu kwe- $ 55. Nangona kunjalo, sinokuqhubeka nokubona ukunyuka ukuba iinkunzi zeenkomo zihlala zisebenza kwintengiso. Ngelahleko ezi--2.66%, i-LTC ihleli iyindawo yesithandathu ngobukhulu kwi-cryptocurrency kwikhaphethi yentengiso
Uhlalutyo lwamaxabiso eLitecoin (LTC): Itshathi yemihla ngemihla -Ngathath'icala
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 64, $ 72, $ 80
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 52, $ 47, $ 40
I-Litecoin okwangoku idibanisa kwitshathi yemihla ngemihla. Ukwazi ukuba imarike iphantsi kolawulo lwe-bearish yexesha elide, abathengisi abafutshane babambekile kwiintsuku ezi-5 ezidlulileyo njengoko ukonyuka kwamaxabiso ngequbuliso nge-25 ka-Okthobha kwanika iinkunzi incwina. Ukuqhubekeka kokuqhubekeka, i-LTC inokuvavanya i-64 yeedola ngaphambi kokunyuka ukuya kuxhathiso oluthe tyaba (tyheli) kwi- $ 72 kunye ne- $ 80. Phakama ngaphezulu komgca othe tyaba sisiqinisekiso saphakathi kwexesha lokunyusa.
I-LTCUSD, itshathi yamaxabiso emihla ngemihla-Okthobha 30
Ngenye indlela, umgibe wokuxhoma unokwenzeka ukuba i-LTC iyehla ngokuthe ngqo kwinkxaso yangaphambili kwi- $ 52 kunye ne- $ 47 kwaye kwangaxeshanye ibuyisa urhwebo ngaphakathi ngaphakathi kolwakhiwo lwe-wedge. Inkxaso engaphezulu ilele kwi- $ 40. I-Litecoin ngoku ivavanya inqanaba lomqondiso we-MACD. I-crossover kufuneka inike amandla awaneleyo kwintengiso ukuze iye kwi-bullish. I-RSI ngoku ilinde kumanqanaba angama-50 kodwa inokuqhubeka nokukhula ukuba inqanaba linokuqina njengenkxaso.
I-Litecoin (LTC) Uhlalutyo lwamaxabiso: Itshathi yeYure -Thwala
Ukulangazelela iLitecoin ngalo mzuzu kunokuba sisikhundla esingalunganga kubarhwebi bethutyana emva kokwehla kwamaxabiso kwakutshanje kunxantathu. Uxinzelelo oluqhubekayo lokuthengisa kunokubangela ukuba i-Litecoin iwele kwi-55 yeedola ukuya kwi-50 yeedola ukuba unikezelo luba nzima. Nangona kunjalo, intshukumo engeyonyani inokuzibuyisela umva iinkunzi. Ukuhamba okunjalo kunokuba yinto engekho ngqiqweni okwangoku, nangona imarike isenokungaqiniseki.
I-LTCUSD, itshathi yamaxabiso ngeyure-Okthobha 30
Nangona kunjalo, ukuchasana nokubukela i- $ 60 kunye ne- $ 64 ngaphambi kokuba sibone ukunyuka okuqhubekayo. Ukuza kuthi ga ngoku, i-MACD iwele kancinci ukubonisa ukuba iLitecoin ibuthathaka kwitshathi yeyure. I-RSI okwangoku ikumanqanaba angama-38, ityhila ukuba abathengisi bakwiimarike.
LITECOIN UTHENGISE UMqondiso
Thenga ukungena: $ 57.9
tags LTCUSD, Uqikelelo lwamaxabiso, Uhlalutyo Technical
I-GBPJPY ithintelwe ngaphakathi kuRhwebo oluQinisekileyo njengoko abaThengi beLinga ukuthatha uLawulo kwakhona
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-Okthobha 30
Isibini seFX sibona isantya esinyukayo esincinci ekuqaleni kweseshoni yaseYurophu nge-GBPJPY yokubeka intshi kumda ophezulu ukuvavanya umgca othe tyaba kwinqanaba le-141.50. Okwangoku, esi sibini sizama ukuphuma kububanzi beshishini esixineneyo siye phezulu.
Amanqanaba okumelana: 148.66, 146.57, 144.51
Kumfanekiso wemihla ngemihla, ulwakhiwo lokudibanisa ukusuka kwinqanaba elikwi-126.54 (ezantsi) lisaqhubeka ngokunyuka ukuya kwinqanaba elikwi-130.44 kwimisebenzi epheleleyo. Nangona kunjalo, ukuqhubela phambili kunokubonwa kubuyela kwinqanaba kwinqanaba le-146.57 / 148.66.
Nangona kunjalo, uxhathiso oluqinileyo olusuka apha lunokwanela ukunciphisa umda ophezulu. Kwaye ngeli xesha le meko inokuhlala njengeyona ndawo ekucingelwa ukuba ilindelwe ngokude kwinqanaba le-130.44 lenkxaso. Imbonakalo iyonke iyakhula, ibonisa ukunyuka okuthe tye kwixesha elide.
Kwiphepha le-flip, i-intraday bias kwi-GBPJPY ihlala ingathathi hlangothi kwiseshoni yangoku ngaphandle kokuba kungenjalo kwaye ukudityaniswa kwinqanaba le-141.50 kunokwandiswa kuluhlu olufana nendlela.
Okwangoku ngokulandelayo, ukuntywila okulandelayo akunakugwetywa ngaphandle, nangona kunjalo, icala elisezantsi linokuqulathwa ngaphezulu kwenqanaba le-135.49 yokumelana yajika inkxaso yokuqalisa kwakhona ukuphakama kwembambano.
Ixabiso lokungena: 140.07
tags GBPJPY, Indawo yobuGcisa
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC) -Umzekelo wePathathu oGcina iBull kwi-Suspense njengoko i-Spike isondele
Ukusukela kuhlalutyo lwethu lwangaphambili, iBitcoin ihleli ithe cwaka kwaye ayithandabuzi kulwakhiwo olunxantathu olulinganayo kwiyure-4 kunye neyure nganye. Umthamo wokurhweba uye wehla ngokunyanisekileyo kodwa i-trajectory ye-bullish ihlala njengoko i-Bitcoin iqhubeka nokwenza ipateni yeflegi. Iimpawu zokurhweba nge-crypto ukuba into enkulu iza kwi-BTC kungekudala okanye kamva.
Amanqanaba okuphikiswa aphambili: $ 9550, $ 9800, $ 9980, $ 10350
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 9000, $ 8800, $ 8500, $ 8300
Ukusuka kwimimandla engama- $ 9400, iBitcoin ngoku itshintshele urhwebo lwayo ukuya kuthi ga kwimimandla engama- $ 9200 ngokulandela ukufinya okuncinci kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo. Oku kuphakamisa ukuba ixabiso lilingane ngenxa yokungabikho komdla phakathi kwabahwebi. Izolo, i-Bitcoin ibone ukuhla okuncinci ukuya kwi-9100 yeedola ngaphambi kokuba ibone isaphulelo esisaxakekileyo sonyuka. Nangona kunjalo, i-9500 yeedola, i-9770 yeedola, i-9980 yeedola kunye ne-10350 yeedola zixhathisa ukunyuka.
Itshati ye-BTCUSD, 4H-Okthobha 30
Okwangoku, i-RSI isekuluhlu olusezantsi kodwa ngoku ifumene inkxaso kumanqanaba angama-50. Imilinganiselo yokuhamba ye-MACD iwele phantsi ukubonisa ukuthengisa okuqhubekayo, nangona intengiso isalungile. Nangona kunjalo, ukuba i-Bitcoin idlala i-bearish, kufuneka silindele inkxaso kwi-9000 yeedola, ukuhlangabezana nomgca wenkxaso ehla (ngwevu). Umnqamlezo ongaphantsi komgca ongwevu ungakhokelela i-BTC ukuya kwi- $ 8800 kwaye ibuyele kwindawo yokugqibela yokudityaniswa kwe- $ 8500 kunye ne- $ 8300
Njengokuba amaxabiso emali engama- $ 9300 ayengasakwazi ukubamba, iBitcoin yayisele yaphule isitayile seentsuku ezintathu sokwenza unxantathu njengoko ukubuyela umva kusondele. Sinokubona ukuvulwa okufutshane kwi- $ 9000 yenkxaso kungekudala. Inkxaso ye- $ 8900 kunye ne- $ 8800 inkxaso inokuqhubeka ukulandela ukuba unikezelo luba nzima.
Itshathi ye-BTCUSD ngeYure-Okthobha-30
Into enomdla kukuba, i-RSI ngoku ityibilika ngaphantsi kwenqanaba lama-50 kodwa i-MACD isazimisele okwangoku. Okwangoku, sinokuthi abathengisi bexesha elifutshane bayadlala. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zingakhusela inkxaso eyi- $ 9000 ngokuqinileyo, sinokulindela ukubuyela ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ukuchasana okubalulekileyo, okwangoku, yi- $ 9300, $ 9500 kunye ne- $ 9680.
Thengisa ungeniso: $ 9277
I-TP: $ 9100
tags BTCUSD, Uhlalutyo lwamaxabiso, Uhlalutyo Technical
I-ESMA kunye ne-ASIC zilindele intsebenziswano yase-Australia
Kwakungekho kwakudala kudala ukuba umlawuli wezemali wase-Europe u-ESMA (waseYurophu nooGunyaziwe beeMarike) babeke isithintelo kubarhwebi ukuba bakhuphe iibhonasi zedipozithi. Oko kwenzekile emva kokuba amanye amazwe e-EU, njengeBelgium, ethathe isigqibo sokuthintela naluphi na unyuselo lweenketho zokubini.
Ayichaphazeli nje kuphela amandla abarhwebi okufumana naziphi na iibhonasi ezivela kubarhwebi, kodwa ikwabeka nemithetho emitsha kurhoxiso, oluya kuthi ngoku luthathe ixesha elide ukufumana ukuba usebenzisa ugqithiso lwebhanki ukwenza njalo.
Nangona kunjalo, imigaqo emitsha ye-ESMA ibinempembelelo encinci kwamanye amazwe. Kwakukho amawaka abarhwebi abanokuxhamla kwi- hot XM akukho promo yebhonasi yediphozithi kwaye baqalise uhambo lwabo lokurhweba nge-akhawunti esele ilayishwe nge-250 ZAR, elingana ne-30 USD.
Iibhentshi zase-Australia kunye nentsebenziswano ye-ESMA / ASIC
Nge-20 ka-Okthobha, i-ESMA kunye ne-Australia yomlawuli we-ASIC (iKhomishini yoKhuseleko kunye nezoTyalo-mali yase-Australia) babhengeze ukuba batyikitye ngempumelelo iMemorandam yeebenchmark zase-Australia.
Kwangoko kulo nyaka, ngeyeSilimela, isakhelo somthetho kunye nesuphavayiza sase-Australia samkelwa njengelingana neemfuno ezihambelanayo phantsi koMmiselo weeBenmarkmark Regulation. Oko kwavumela amaziko agadwe yi-EU ukuba asebenzise iibhentshi ezibhengezwe njengezibalulekileyo yi-ASIC.
Ummiselo weBenchmark Regulation (BMR), wona, umanyanisa isakhelo esiqhelekileyo saseYurophu ukubonelela ngemfezeko yemilinganiselo esetyenzisiweyo kwimida ye-EU.
Inkqubo-sikhokelo yezomthetho neyolawulo e-Australia esebenza kwimilinganiselo yemali ehambelana neemfuno ze-BMR yamkelwa yiKhomishini yaseYurophu.
Isivumelwano sibaluleke kakhulu, njengoko i-MoU iqinisekisa ukuba kufanelekile ukuba kwenziwe amalungiselelo entsebenziswano. Oko kuya kusixhasa isigqibo sokulingana kwe-EU kunye nokuqinisekisa ukutshintshiselana ngolwazi olusebenzayo phakathi kwamalungu.
Sihlalo we-ASIC, uJames Shipton uxele:
"Ukuphucula nokuphucula ukusebenzisana nabalingani bethu bamanye amazwe yinto ephambili kwi-ASIC…"
“Siyavuya ukwazisa esi sivumelwano kwaye sijonge phambili kwintsebenziswano yethu ne-ESMA kwixa elizayo. Xa sibonelela ngoncedo omnye komnye kwaye sitshintshiselana ngezimvo kunye nolwazi, oku kuyanceda i-ASIC ukuba iphumeze umbono wayo wenkqubo yezemali enobulungisa, eyomeleleyo nefanelekileyo kubo bonke abantu base-Australia. ”
Nakuba I-ESMA Sihlalo, uSteven Maijoor, uthe:
“Ukusetyenziswa kweebenmarkmark zezimali kwiimalike ezinkulu zehlabathi kubalulekile kubathathi-nxaxheba kwezorhwebo kwaye ukuchaneka nokuthembeka kwabo kufuneka kuqinisekiswe ngawo onke amaxesha. Ukunceda abalawuli ukuba bafezekise ezi njongo, ndiyavuya ukuba iMemorandam yokuQondana ye-ESMA-ASIC izakuxhasa abalawuli baseYurophu kunye ne-ASIC ukuba basebenze kunye ngokomthetho osemthethweni. ”
tags ASIC, Ostreliya, I-ESMA